Qurxinta cagta sariirta - Maxaa alaabta guriga ah oo aan dhigi karaa? | Bezzia
Sideen u qurxin karaa cagta sariirta
Susana godoy | 06/01/2022 14:00 | Dharbaaxo
Qurxinta cagta sariirta Waa mid kale oo ka mid ah xulashooyinka waaweyn ee ay tahay inaan ku xisaabtano. Sababtoo ah in kasta oo dhammaan alaabta guriga iyo tafaasiisha ay sax yihiin, mararka qaarkood waxaan iloobi karnaa meel gaar ah oo wax badan naga caawin karta si aan u habeyno qolkeena.
Waxaa jira fikrado dhowr ah oo ay tahay inaan ku xisaabtano, tan iyo Had iyo jeer waxay ku salaysnaan doonaan dhadhankaaga ama qaabka qolkaaga jiifka ee gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad rabto inaad ku raaxaysato dhammaystiran, qurxinta asalka ah oo badan oo kuu ogolaanaya inaad kaydiso, ka dibna ha seegin waxa soo socda.
1 Ku qurxi sabuuradda cagta jirrid
2 Dhig fadhiga fadhiga
3 Dukaan buugag lagu iibiyo oo ku yaal sariirta dhinaceeda
4 Dooro bangi
5 Ku sharad laba saxaro
Ku qurxi sabuuradda cagta jirrid
Waa mid ka mid ah fikradaha ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca markaan ka fikirno qurxinta sabuuradda cagaha. Runtu waxa ay tahay mahadda tan, waa in aan sheegno in muuqaalkiisu uu wax badan iska beddelay. Inkastoo weli Waxaa jira moodooyin badan oo canab ah oo loogu talagalay aaggan qolka jiifka, waxaad sidoo kale dooran kartaa dhamaystir kale oo leh qaabab badan oo leydi ah. iyo nooca ugu yar tusaale ahaan wicker ama tones beige. Si kastaba ha ahaatee, waxa aan ognahay waa in ay naga caawiyaan kaydinta oo aan ku kaydin karnaa wax kasta laga bilaabo go'yaal ilaa bajamas haddii loo baahdo.
Dhig fadhiga fadhiga
Sidaan ognahay, noocyada fadhiga fadhiga ayaa ah kuwa ugu kala duwan. Sidaa darteed, hubaal waxaa jira mid ku habboon aaggan qolka jiifka. Goobtan waxaad dooran kartaa mid leh dhabarka dambe, kaas oo aan aad u sarreyn oo leh laba kursi. Inkasta oo kuwa qaabka divan-ka ah ay sidoo kale wax badan ka muuqdaan. Maadaama ay cidhiidhi yihiin oo ay ku habboon yihiin inay qurxiyaan sabuuradda cagaha iyada oo aan dib loo soo celin ugu yaraan.
Dukaan buugag lagu iibiyo oo ku yaal sariirta dhinaceeda
Si la mid ah ayaad sidoo kale awood u yeelan kartaa dooro alaab guri oo afar xagal ah oo aan aad u dheerayn. Maanta mahad dhamaan alaabtan modulka ah, waxaan u heli doonaa iyaga oo aan dhibaato lahayn. Waa doorasho ku habboon si aad dhammaan buugaagtaada si wanaagsan loo habeeyo. Sidaa darteed, habeennada aanad seexan karin, dhib ma leh in aad naftaada u ogolaato in lagu qaado mid ka mid ah tacaburradaas daabacan. Waa mid ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee aad male-awaalkaaga u oggolaan karto inuu duur-joog u noqdo. Hadda waa inaad doorataa alaabta guriga oo leh khaanadaha iyo iyaga, marka lagu daro buugaagtaas, waxaad had iyo jeer dhigi kartaa faahfaahinta qurxinta ee qaabka sanduuqyada si aad u sii wado kaydinta qalabkaaga yaryar.
Haa, sidoo kale waa mid kale oo ka mid ah fursadahaas aan laga tagi karin sababtoo ah shaki la'aan, waxaan ku arki doonaa qurxinta kala duwan ee kala duwan. Had iyo jeer waxaad u bixi kartaa a kursiga fudud, dhamaystir rustic ah halkaas oo alwaax had iyo jeer waa kan ugu weyn. Laakiin mar haddii aan nidhaahno waxaa jira doorashooyin, waxaad heli doontaa beddelaadyo badan oo aad jeclaan doonto. Sababtoo ah waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa sidii kursi, si aad u awooddo inaad gashato kabaha, tusaale ahaan. Ama hoostiisa, dhig dambiisha ama sanduuqyada sii wada inay sharad ku galiyaan kaydinta aan aad u jecelnahay.
Ku sharad laba saxaro
In kasta oo ay run tahay in aan had iyo jeer xusno fikradda gabal gabal oo alaabta guriga ah, had iyo jeer maaha inay sidaas ahaato. Maadaama aan sidoo kale samayn karno qurxinta gacanta laba saxaro, tusaale ahaan. Sidaa darteed, waxaan ku dhejin karnaa sariirta cidhif kasta oo aan si dhexdhexaad ah u ahayn. Laakiin adiga kaliya ayaa leh erayga ugu dambeeya! Intaa waxaa dheer, saxarada waxay yeelan kartaa qayb sare oo aad u raaxo leh, maadaama ay noqon karaan kuraas fudud ama waxay ku dhamaan karaan nooc ka mid ah barkin raaxo leh. Sidaad aragteen, xulashooyinku aad bay u kala duwan yihiin oo mid kasta oo naga mid ah wuxuu heli doonaa midka ugu habboon qurxintayada. Maxaa ugu wanaagsan in lagu qurxiyo cagta sariirta?
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Qurxinta » Dharbaaxo » Sideen u qurxin karaa cagta sariirta
Sida looga fogaado hoos u dhigista shaqada
Ma jeceshahay sawir qaadista? Ku raaxayso 6-daan bandhig